Quruxda Congolese: adigoo soo bandhigaya midabkeena marka aan isku dayno in aan wax tarno, waa in aan ilaalinno sharafteena "Muhiim maaha in qofkasta indhaha la saaro" Waxaanu ku faraxsanahay dhaqankeena iyo caadooyinkeena; oo ay yihiin kuwo aan lagala tashan karin
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 13, 2019 00: 00 No Comments
Waxa ugu muhiimsan waa inaad had iyo jeer naftaada u iftiimiso si sharaf leh oo sharaf leh adiga oo aan qofna u oggolaan awood uu ku marin habaabinayo ama bakhtiiyo. Aynu ku faani karno hantideena gudaha iyo ixtiraam leh xaaladaha oo dhan.
Su’aal ku socota qorayaasha Baybalka: Miyuusan Ilaaha reer binu Israa'iil mas'uul uga ahayn masiibada ku haysa dhulka? Baybalku wuxuu inoo sheegayaa in mid ka mid malaa'igaha la yiraahdo Shayddaan, ka dib markii uu caasiyey shaydaan, uu Ilaah ku tuuray dhulka
Sep29 07: 30